Manampy ny / Tutorials – Flatboat goby Danube nandritra ny dia
360° Mivelatra sary. Toro-hevitra sy fotoana hamerina handinika vitsivitsy.
Izany no vongambato #4 ny 4 ao amin' ny series"360° Tutorials” (Tsindrio mampivelatra) Google fordert für die Streetview Fotografie, dass die Kamera etwa in Schulterhöhe plaziert werden soll. Möchte… Hamaky bebe kokoa
Natsofoka ao amin' ny 360, Manampy ny / Tutorials
Nasianao marika 360, Fototechnik, Panorama
Streetview: Ihany 360° sary sy optimize ary hampiraikitra. Ao amin' ny 2 Hivoatra lavitra minitra vokatra. Ein kleiner Mini Workshop für die Local Guides Connect
Izany no vongambato #3 ny 4 ao amin' ny series"360° Tutorials” (Tsindrio mampivelatra) Hier entsteht ein kleiner Workshop, den ich aber noch ausarbeiten muss. Im ersten Teil geht es… Hamaky bebe kokoa
Nasianao marika google, maps, Streetview
Rainer ny tady tsisy – 360Mahafaoka ° ho tompon' IPhone amim-pitarainana So bekommt Ihr den Tennisplatz richtig abgelichtet.
Rainer: “P.S.: Ny “ny fotoana IPhone taloha” Manana aoriako – eto ny tsisy (mba hialana amin' ny tsipika mihetsiketseha;) Ny tady miaraka amin' ny kaopy kely suction (ho an' ireo finday) amin' ny tanana iray sy ny tady (ho an' ilay ilan-kiraro) amin' ny lafiny iray hafa. Manana fotoana lalandava ny nadir sy ny Panos dia mampientanentana tokoa … ho an' ireo izay mila;)”
Nasianao marika 360, Panorama, Tipps, Tricks, Tutorial
360, Manampy ny / Tutorials
Streetview: Ihany 360° sary sy optimize ary hampiraikitra. Ao amin' ny 2 Hivoatra lavitra minitra vokatra.
Rainer ny tady tsisy – 360Mahafaoka ° ho tompon' IPhone amim-pitarainana
360Hampiraikitra ° sary sy horonan-tsary mora ao amin' ny WordPress. Plugins.
Ny sasany amin' ireo mpamaky ny dia nanontany tena tapa-kevitra ny ao amin' ny Nôvambra momba ny Krismasy lahatsoratra. Ny antony hampiasantsika tamin' ireo fanontaniana miverimberina isan-taona ao amin' ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny sambo samihafa, inona no noho izany dia azonao atao ny manome. Ny lohahevitry ny sary sy horonan-tsary no nitondran' stepmotherly indrindra. Nandray azy ireo efa roa ireo vokatra tena isika, izay natao ho an' ny tsena Aziatika ary dia toy izany no tsy hita tany Eorôpa. Noho izany izy dia mazàna hisarihana kely. Ankoatra izany dia tsy maintsy nanisa iray amin' ny fotoana tena faran' izay lava ny fomba fandefasana.
Maneran-tany, Mirentirenty & Famaranana
Voaro: Drone Xiaomi MI amin' Europe hatetika compliant kely. Koa andao handeha.
Misy tsy sombiny satria iray vongambato voaro ity.
Miditra ny tenimiafinao raha hijery ireo fanamarihana.
2018 Taona vaovao voatahy
Te-maniry anareo rehetra taona vaovao voatahy tamin' io fotoana io isika. Ary foana ny hatevin' ny tanany rano eo ambanin' ny ifotorana. Wilfried & Daniela
Voaro: Fotoam-pianarana Iray transponder AIS ho an' ny sambo ny fanatanjahan-tena laza sy ara-dalàna na ilaina?
Ireo fitaovana fitsapam-pahaizana, Horonan-tsary
Fanomezam-pahasoavana amin' ny Krismasy: Drone Xiaomi MI maodely vaovao L 4 sy gimbal ny skipper amin' ny sarany ambany ahy
Izany dia tokony ho eo ambanin' ny hazo Noely 2017 tsy banga. MI 360° fakan-tsary tsara kokoa noho ny GOPRO fusion?